RASMI: Dean Henderson oo laga saaray xulka qaranka England & Goolhayaha lagu beddelay booskiisa oo la shaaciyey – Gool FM
(London) 15 Juun 2021. War goordhow soo baxay ayaa sheegaya in Dean Henderson laga saaray xulka qaranka England ee ka qeyb galaya tartanka Euro 2020, waxaana booskiisa lagu bedelay Aaron Ramsdale.
Goolhaye Dean Henderson ayaa xulka saddexda Libaax ee ciyaaraha Euro 2020 waxaa looga saaray sababo dhaawac, iyadoo xiddiga Man United uu weli halgan ugu jiro soo kabashadiisa dhaawac ka soo gaaray sinta.
Goolhayaha kooxda kubadda cagta Manchester United ee Dean Henderson ayaa lagu qasbay inuu ka baxo Euro 2020 sababo la xiriira dhibaato dhanka sinta ah.
Dean Henderson ayaan kursiga keydka fadhin kulankii xulkiisa England uu 1-0 kaga badiyay Croatia ciyaartii furitaanka Group D ee tartanka Euro 2020, laakiin taas ayaa markii hore la sheegay inay ahayd taxadar kaliya.
Laakiin, Si kastaba ha noqotee, waxaa lagu qasbay inuu ka shaqeeyo xulka markale Isniinta, waxaana la go’aamiyay in ku lug lahaanshihiisa la xaddido, sidaas darteed tallaabada ugu fiican ee la qaadayo ayaa ah inuu ku laabto Man United isla markaana la qiimeeyo xaaladdiisa oo baxnaanin loo sameeyo.
Bayaan ka soo baxay xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ee FA-ga ayaa u dhignaa: “Aaron Ramsdale wuxuu Dean Henderson ka beddelay xulka England tartanka UEFA Euro 2020.
“Henderson waxaa looga saaray xulka dhaawac sinta ah oo xaddiday ka qeyb qaadashadiisa tababarka inta tartanku socdo.”
“Sida uu dhigayo sharciga UEFA, xulalka waa loo ogol yahay inay bedelaan goolhayeyaasha sababo caafimaad awgood.”
Goolhayaha Manchester United ee Dean Henderson ayaa dib ugu laaban doona Kooxdiisa si loo qiimo oo baaritaanno dheeri ah loogu sameeyo iyo baxnaano ka hor bilowga xilli ciyaareedka cusub ee 2021/22.